Nhau - Uchiri kushandisa swabs dzedonje kurapa maronda? Huai'an ZTE Mishonga "Yakazivisa Iyo Yakajairwa Yeiyo Isina Utano Cotton Swabs Yako"
Sechinhu chakakosha chemumba, machira ekotoni anonyanya kushandiswa, kungave chishandiso chekugadzirisa ruzivo panguva yekuzora, kana chishandiso chekubatsira kutapudza uye kupukuta mafuta panguva yekurapa ronda. Kunyanya kana uchinge watarisana nemaronda kana eczema matambudziko eganda, kuitira kudzivirira hutachiona hwechipiri, swabs dzedonje dzinowanzo shandiswa kupukuta mushonga. Muchokwadi, haazi ese swabs ekotoni akakodzera pakurapa maronda. Kana iyo swabs yekotoni isina kusarudzwa nemazvo, kwete chete hutachiona hwechipiri haugone kudzivirirwa, asiwo May anogona kukonzera maronda kuti awedzere
Vepamba vatengesi vezvigadzirwa zvehunyanzvi zvekurapa uye zvigadzirwa zvekuuraya utachiona zvakataura kuti haazi ese swabs ekotoni anogona kushandiswa pakurapa zvinangwa. Kurapa donje swabs inofanira kumakwa se "chena" uye "isina kubereka" isati yashandiswa kurapa hutachiona. Kunyangwe iyo swab yedonje idiki, zvigadzirwa zvayo uye tekinoroji yekugadzirisa zvakare yakanaka kana yakaipa. Izvo chaizvo nekuda kwekunzwisisa kwesainzi kuti Huai'an ZTE Chiremba donje swabs inogona kuve inotungamira mhando yeiyo isina kuchena donje swabs.
Professional sterilization kurapwa: kubereka kunovimbisa kwakawanda kuchengetedzeka kweHuai'an ZTE Pharmaceutical mashopu nemafekitori zvese zvakavakwa zvinoenderana neyenyika yekurapa chishandiso GMP zviyero kuona kuti zvese zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinosangana nezvekurapa zviyero. Huai'an ZTE yekurapa donje swabs hazvisi izvo. Huai'an ZTE yekurapa donje swabs inorapwa neethylene oxide sterilization tekinoroji inoshandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvekurapa kuona kuti inochengetwa aseptic isati yashandiswa. Izvo zvinoitwa mukuomerera zvinoenderana nehunyanzvi zvinodiwa zvakasimbiswa nekunyoreswa kwekurapa donje swabs Kudzivirira hutachiona hwehutachiona hwechipiri.
Mazhinji makotoni swabs parizvino pamusika haana kunyorwa se "chena", saka mhando iyi yekotoni swabs haina kukodzera kurapwa maronda, uye kushandiswa kwemumba kunofanirwa kusarudzwa zvakanyatsonaka.
Chiremba zviyero zvinopinza donje: yakapfava, yakasununguka uye yakawedzera hydrophilic
Tichifunga nezvekuti swabs dzedonje dzinogona kushandiswa kurapa maronda muhupenyu hwemhuri, Huai'an ZTE Pharmaceutical's sterile disinfection cotton swabs yakanyatso kuzvida ivo zvinoenderana nematanho ekurapa kubva pakutanga, kwete chete kushandisa ethylene oxide tekinoroji tekinoroji mukugadzira maitiro, asi zvakare kusarudzwa kwezvinhu. Sarudza yekurapa inopinza donje sechinhu chikuru chekuwedzera nyaradzo yekushandisa. Kurapa kunotora donje inonziwo "medicated cotton". Mushure mekudzora kwemaitiro, iyo nzvimbo haina mafuta uye ine hydrophilicity iri nani. Zviri nyore paunenge uchipukuta mushonga wemvura kana kuuraya maronda. Uye zvakare, yekurapa inopinza donje donje yakapfava uye yakatetepa, kwete yakachena chete muvara, asi zvakare yakapfava. Musoro wekotoni wakaomarara unogona kutarisira zviri nani ganda rakapfava.
Cotton swabs inoshandiswa zvakanyanya, uye vanhu vazhinji vanowanzo tarisa kuchengetedzeka kwavo. Huai'an ZTE Mishonga inoyeuchidza munhu wese: Kana imba swabs swabs ichishandiswa pakurapa ronda, unofanirwa kusarudza isina kuchena donje swabs, uye iwe unofanirwa kutarisisa kuisimbisa mukuchengetedza kwezuva nezuva kuti usasvibiswe nekotoni swabs.
Huaian Zhongxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd. yakazvipira kuvaka nyanzvi yekupa chikuva mune zvekurapa nehutano minda ine zvigadzirwa zvechokwadi nemitengo yakaderera, uye inokudzwa zvakanyanya kupa simba redu kuhutano hwevanhu. Pahwaro hwekuzivikanwa nevatengi Mune ramangwana, isu zvakare tichazotora mutoro wekutungamira indasitiri kune kusimudzira kwepamusoro, uye pamwe chete kuvaka yakakwana uye inotungamira indasitiri yekugadzira cheni kuti ibatsire mukuzadziswa kwekutanga kweanosanganisira kurapwa kwekurapa.
Nursing Pad, Inoraswa Medical Chiso Mask, Antiviral Mask, Mhepo Inofema, Chiremba Cotton, Sterilized Cotton Swab,